J@M - Episode6- Daily Routine - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on August 7, 2012 at 10:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Jam: The Web Design Company that Teaches You English
6. နေ့စဉ်လုပ်ငန်း (Daily Routine)
Jeff ဟာ Jam ကဒီဇိုင်းနာတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ပုံမှန်တစ်နေ့တာကတော့ ဒီလိုပါ။
မနက် ၁၀:၃၀ နာရီ ….. မနက် ၁၁:၃၀ နာရီ ….. ည ၉:၀၀ နာရီ …… ည ၁:၀၀ နာရီ တွေမှာဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ ပုံလေးတွေကိုပဲကြည့်လိုက်ကြနော်။
အပေါ်မှာသရုပ်ဖော်တာလေးတွေ ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ဟာက ဘယ်ပုံနဲ့တွဲလို့ရမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
နောက်ပိုင်းသူနေရတာ လန်းဆန်းလာပါတယ်။ သူကအလုပ်အများစုကို ညနေပိုင်းတွေမှာလုပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ သူမိုးချုပ်ထိအလုပ်လုပ်တယ်။ ည ၉နာရီ၊ ၁၀နာရီလောက်ထိပေါ့။
Jeff ကမနက်အိပ်ယာထပျင်းသူပါ။ မကြာခဏဆိုသလို အချိန်လွန်အောင်အိပ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့။
Jam အဖွဲ့သားတွေဟာမကြာခဏအစည်းအဝေး လုပ်ရပါတယ်။ Jeff ကတော့ အစည်းအဝေးတွေကိုမနှစ် မြို့ပါဘူး။ သူကသူ့တစ်ယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရတာ ပိုကြိုက်တယ်လေ။ သူအိမ်ပြန် နောက်ကျလေ့ ရှိပါတယ်။
ညဦးပိုင်းတွေမှာ TV မှာလာတဲ့ရုပ်ရှင် တွေကိုကြည့်တတ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်လဲ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ video games တွေကိုနာရီနဲ့ချီ်ပြီး ကစားတာပါပဲ။ ရံဖန်ရံခါ တော့ ဆိုဖာ ပေါ်မှာပဲ အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့။
Picture 1: Jeff hates getting up in the morning. Quite often he oversleeps – like today, for example!
Picture 2: The Jam team often have meetings – and Jeff hates meetings! He prefers to work on his own.
Picture 3: Later on, he’s feeling great. He does most work in the evenings. Sometimes he stays late – until nine or ten o’clock!
Picture 4: He usually gets home quite late. In the evening, he likes to watch films on TV, or best of all – spend hours playing video games, occasionally he falls asleep on the sofa!
အခု Jeff ရဲ့ပုံမှန်နေ့စဉ်တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းကိုတွေ့ခဲ့ပါပြီ။ ပြောသွားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ပုံမှန် တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း၊ လုပ်နေကျလုပ်ငန်း ကို Adverbs of frequency တွေဖြစ်တဲ့ “always, usually, sometimes, often, occasionally, rarely, never” စ တာ တွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီစာလုံး တွေကို ဝါကျရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဝါကျ Main Verb ရဲ့ အရှေ့ မှာဖြစ်ဖြစ် ထည့်သုံးလို့ ရ ပါတယ်။ ဝါကျထိပ်ဆုံး မှာသုံးတာကတော့ ဒီ Adverb ကိုထင်ရှားသိသာစေချင်လို့ပါ။
Quite often, he oversleeps.
Sometimes, he stays late – until nine or ten o’clock.
The Jam team often have meetings.
He usually gets home quite late.
Occasionally, he falls asleep on the sofa.
Verbs တွေကိုကြည့်ပြန်ရင်လဲ Simple Present Tense တွေချည်းတွေ့မှာပါ။ အမြဲတမ်းလုပ်နေကျကို ပြောနေတာကိုး။ Adverbs of Frequency မပါရင်တောင်မှ လုပ်နေကျ၊ ဖြစ်နေကျ ကိစ္စတွေကို Simple Present Tense ကိုသုံးပါတယ်။
Jeff hates getting up in the morning.
He does most work in the evenings.
Jeff hates meetings.
He prefers to work on his own.
He likes to watch films on TV.
He likes to spend hours playing video games.
ကဲကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပုံမှန်တစ်နေ့တာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်း အကြောင်းကို စာကြောင်းငါးကြောင်း လောက်ချရေးကြည့်ရအောင်။
Jeff ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်း ကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ဝါကျတွေထဲက စာလုံးမဲ Adverbs of frequency တွေရယ်၊ Simple Present Tense ရယ်သုံးပြီးတော့ပေါ့။
Permalink Reply by 36t649t4cx51y on August 7, 2012 at 16:21
Permalink Reply by 2glnxnhn08l7x on August 7, 2012 at 20:59
Permalink Reply by 3rkhnykqo4j2s on August 7, 2012 at 21:01
Permalink Reply by upokun on August 7, 2012 at 23:54
Permalink Reply by War Lay on August 8, 2012 at 13:58
Permalink Reply by Nilar on August 16, 2012 at 15:09
thanks for sister post!!
Permalink Reply by Khaing Myint Myint Min on August 17, 2012 at 10:44
Thank you so much Teacher (Daw May May Win).I want to study next lesson.
Permalink Reply by Hnin on August 17, 2012 at 20:50
Permalink Reply by ppsoe on August 23, 2012 at 10:29
Permalink Reply by mosesphyareh on August 24, 2012 at 0:49
Permalink Reply by 33ecz6t19dk8b on October 4, 2012 at 10:08
Permalink Reply by thinnthinnhtay on December 16, 2012 at 18:17